ယူတို့ရဲ့ K မင်းသားမှာ ဒီလိုချစ်စရာကောင်းတဲ့အချက်လေးတွေရှိနေတာသိရဲ့လား? 😍 – Trend.com.mm
ယူတို့ရဲ့ K မင်းသားမှာ ဒီလိုချစ်စရာကောင်းတဲ့အချက်လေးတွေရှိနေတာသိရဲ့လား? 😍
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကျော်အနုပညာရှင်အဆိုတော်မင်းသားချော Lee Joon Gi (Lee Joon Ki)ကိုတော့ ဒီကပရိသတ်တွေက K လို့ပဲချစ်စနိုးနာမည်ပေးထားကြပါတယ်။K ဟာ သရုပ်ဆောင်ပညာမှာထူးချွန်တဲ့အတွက် ဆုတွေလည်းအများကြီးရရှိထားသူဖြစ်သလို နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေရဲ့ အသည်းစွဲမင်းသားတစ်လက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုပရိသတ်တွေက ချစ်ရတဲ့တစ်ခြားအကြောင်းအရာလေးတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိပြီးရင် ပိုတိုးလို့သာချစ်သွားကြဦးမှာပါ။ဒီတော့ ဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေကြောင့် သူ့ကိုပရိသတ်တွေက သည်းသည်းလှုပ်နေတာလဲဆိုရင်…
*K က ပရိသတ်တွေရဲ့ပြောစကားကို အမြဲနားထောင်တတ်သူတစ်ယောက်ပါတဲ့။အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ “ကျွန်တော်က ပရိသတ်တွေရဲ့စကားကို အမြဲအလေးထားပါတယ်။သူတို့ရဲ့စကားတွေကို ဘယ်တော့မှစိတ်မဆိုးပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့က ဘယ်တော့မှမှားတဲ့အရာကိုမပြောပါဘူးတဲ့။ကျွန်တော့်ကိုလည်းအကောင်းဆုံးချစ်ပေးကြတယ်။ပြီးတော့ အသက်ကြီးသွားတဲ့အခါလည်း နုပျိုအောင် Botox မထိုးဖို့လည်းပြောထားပါသေးတယ်။ကျွန်တော်ကလည်းပလတ်စတစ်ဆာဂျရီလုပ်ဖို့ အစီအစဉ်လုံးဝမရှိပါဘူး”ဆိုပြီးဖြေခဲ့ဖူးပါတယ်။ပရိသတ်ဆီက ဝေဖန်အကြံပြုတာတွေကိုလည်းအားလုံးမှတ်ထားပြီးလိုက်နာပါတယ်တဲ့။ဘယ်လိုတောင် ပရိသတ်ကိုအလေးထားတာလဲနော် 😍
*အသက်ကြီးလာလို့လည်းစိတ်ညစ်မိတဲ့သူမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။”သူ့ရဲ့အသက် ၂၀အရွယ်မှာလည်း ကျွန်တော်က ငယ်ရွယ်တက်ကြွတဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့တုန်းက ရင့်ကျက်တဲ့လူတစ်ယောက်တော့ မဟုတ်ခဲ့ဘူးပေ့ါ။အခု အသက် ၃၀ပိုင်းဝင်လာတဲ့ခံစားချက်ကိုလည်းသဘောကျပါတယ်။အနုပညာကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာလည်းပိုပြီးကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်မြင်လာတယ်။သရုပ်ဆောင်တဲ့အပိုင်းကိုလည်းပိုပြီးကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်လာပါတယ်”ဆိုပြီး ဖြေခဲ့ဖူးပါတယ်။
*အက်ရှင်ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေရိုက်ရတာကိုလည်းသဘောကျပါတယ်တဲ့။ဒဏ်ရာအနာတရ ရသွားရင်တောင် အက်ရှင်ပိုင်းတွေလုပ်ရတာပိုပြီးကျေနပ်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။”၀န်ထမ်းတွေနဲ့ဒါရိုက်တာက ဒီလိုအက်ရှင်ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေရိုက်တဲ့အခါ ကျွန်တော်ဒဏ်ရာအနာတရဖြစ်မှာကို
စိုးရိမ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ဒီအသက် ၂၀၊၃၀ ၀န်းကျင်က အက်ရှင်ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေရိုက်ကူးဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ပါပဲ။ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းက ဂျက်ကီချန်းရဲ့ရုပ်ရှင်တွေကိုကြည့်ခဲ့ဖူးပြီးသူ့ရဲ့ အက်ရှင်ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေကိုလည်းအရမ်းကြိုက်ပြီးအရမ်းလေးစားပါတယ်။ရုပ်ရှင်တစ်ကားရိုက်ပြီဆို
သူက သူလုပ်နိုင်သမျှအားလုံးလုပ်တာပါပဲ။ကျွန်တော်လည်း အဲ့ဒီလိုဖြစ်ချင်ပါတယ်”လို့အင်တာဗျူးမှာဖြေခဲ့တာပါ။
*စစ်မှုထမ်းဆောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာ ပိုပြီးပျော်ရွှင်အောင်နေတတ်လာလို့လည်း စစ်တပ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့။“စစ်မှုမထမ်းဆောင်ခင်တုန်းက ကျွန်တော်က ကျွန်တော့်ရဲ့နေ့စဉ်ဘ၀ကိုထိန်းချုပ်ထားလေ့ရှိပါတယ်။အပြင်လည်းခဏခဏမထွက်သလို အရက်သောက်တဲ့အခါမှာလည်းသီးသန့်ေ
သာက်လို့ရတဲ့အခန်းရှိတဲ့ဘားတွေကိုသာသွားတာပါ။ကျွန်တော့်ရဲ့မန်နေဂျာလည်းအမြဲပါပါတယ်။ကောလဟာလသတင်းတွေထွက်မှာစိုးလို့ မိန်းကလေးဧည့်သည်တွေကိုတောင်မဖိတ်ခေါ်ဖူးပါဘူး။စစ်မှုထမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာ ကျွန်တော်ပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်။ညဘက်တွေမှာ အပြင်ပိုထွက်
တတ်လာသလို အသားကင်ဆိုင်တွေကိုသွားတယ်။တစ်ယောက်တည်းကားစီးတယ်။ဘားသွားတဲ့အခါမှာလည်း ကျွန်တော်ကအနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဆိုတာခဏပဲလူတွေသတိထားကြည့်ကြတာပါ။ပြီးတော့လည်း ကိုယ့်အထာနဲ့ကိုယ်ဖြစ်သွားကြတာပါပဲ။စစ်တပ်ထဲရောက်မှ ကျွန်တော်က အရာရာကိုSerious ဖြစ်စွာနေနေခဲ့မှန်း နားလည်တော့တယ်”ဆိုပြီးစစ်မှုထမ်းဆောင်ရာကနေ ပြန်လာပြီးတဲ့နောက် အင်တာဗျူးမှာဖြေခဲ့ပါတယ်။
*K ဟာ တစ်ခြားသူတွေထက်ပိုပြီးအလုပ်ကိုရူးသွပ်စွာလုပ်သူတစ်ယောက်လို့လည်းသိရပါသေးတယ်။ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေးပြီးသွားတဲ့အခါ နားရတဲ့အချိန်၊ဘာမှမလုပ်ရတဲ့အချိန်တွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့ခက်ခဲပါတယ်တဲ့။”သူ့အလုပ်မှာလည်း အရာအားလုံးကိုစိတ်ကျေနပ်တဲ့အထိလုပ်ချင်တဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။သူသာအေးအေးဆေးဆေးနဲ့အိပ်နေမယ်ဆိုရင် အောင်မြင်မှုဆိုတာရှိလာနိုင်ပါ့မလား?”ဆိုပဲ။သူ့ရဲ့ ကြိုးစားမှုက လုံးဝကြီးကို အရာထင်ခဲ့တာပါ။
*စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန်ဇာတ်လမ်းတွေကိုလည်း K က ကြိုက်ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီလိုဇာတ်လမ်းတွေနဲ့လည်း သူ့ရဲ့သရုပ်ဆောင်ပုံ၊သူ့ရဲ့ရုပ်ရည်က ပိုပြီးအံကိုက်ဖြစ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်တဲ့။
*K ရဲ့စိတ်ကူးယဉ်ချစ်သူမိန်းကလေးပုံစံကိုတော့ အားလုံးသိချင်ကြတယ်ဟုတ်! K က ချောမောလှပတဲ့မျက်နှာတစ်မျက်နှာဟာ မြန်မြန်ဆန်ဆန်အိုမင်းသွားနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့် သူက နှလုံးသားနွေးထွေးတဲ့သူမျိုးကိုပဲသဘောကျပါတယ်။သူ့ထက်လည်း ပိုပြီးစိတ်နေစိတ်ထားရင့်ကျက်တဲ့သူ၊သူမရဲ့ ပုခုံးပေါ်မှာကျွန်တော်ပင်ပန်းတဲ့အချိန်တိုင်း၊အမြဲတမ်း ခေါင်းအုံးထားချင်ပါတယ်တဲ့။အဲ့လဲ့ ရိုလိုက်တာ ❤
*အရင်တုန်းက သူဟာ မာနကြီးပြီးဘ၀င်မြင့်တဲ့အခိုက်အတန့်မျိုးခံစားခဲ့ရဖူးပါတယ်တဲ့။”၂၀၀၅ခုနှစ်တုန်းကရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ King and the Clown ဇာတ်ကားဟာ အရမ်းအောင်မြင်ခဲ့ပြီး လူကြိုက်များခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတုန်းက ကျွန်တော်က အတော်ဆုံးပဲလို့တွေးခဲ့ပြီး သူငယ်ချင်းတွေ၊သတင်းထောက်တွေကို မလေးမစားဆက်ဆံခဲ့ဖူးပါတယ်”လို့ ပရိသတ်တွေကိုဝန်ခံခဲ့ဖူးပါတယ်။အခုတော့ K ဟာ အလုပ်ကိုအကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီး ပရိသတ်ကိုလည်းအလေးထားတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်နေပါပြီ။
*Scarlet Heart: Ryeo ဇာတ်ကားရိုက်ကူးဖို့အတွက် K က ၃၃ပေါင်တောင် ကိုယ်အလေးချိန်ချခဲ့ရပါတယ်။ဒါရိုက်တာက သူ့ပုံစံက ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်နဲ့ပိုပြီးကြည့်ကောင်းတဲ့ပုံစံလိုချင်တာကြောင့်လို့ပြောခဲ့တာကြောင့်ပါတဲ့။
*အခု ၂၀၁၈ မှာတော့ K ရဲ့ Lawless Lawyer ဇာတ်လမ်းတွဲလေးထွက်ရှိထားပါတယ်။မကြည့်ရသေးတဲ့ပရိသတ်တွေရှိရင် ကြည့်လိုက်ဦးနော်။မင်းသမီးချော Seo Ye-ji နဲ့တွဲဖက်ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ပရိသတ်တွေကိုအလေးထားပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့စကားကိုလည်း နားထောင်တာကြောင့် သူ့ကို ပိုပြီးအသည်းစွဲအားပေးနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်အိုင်ဒေါလ်က ကိုယ်တို့ပြောတဲ့စကားတွေကို အလေးထားတယ်ဆိုကတည်းက ကျေနပ်စရာကြီးပါပဲ ❤
တောငျကိုရီးယားနိုငျငံရဲ့ နာမညျကြျောအနုပညာရှငျမငျးသားခြော Lee Joon Gi (Lee Joon Ki)ကိုတော့ ဒီကပရိသတျတှကေ K လို့ပဲခဈြစနိုးနာမညျပေးထားကွပါတယျ။K ဟာ သရုပျဆောငျပညာမှာထူးခြှနျတဲ့အတှကျ ဆုတှလေညျးအမြားကွီးရရှိထားသူဖွဈသလို နှုတျခမျးနီမလေးတှရေဲ့ အသညျးစှဲမငျးသားတဈလကျလညျးဖွဈပါသေးတယျ။သူ့ကိုပရိသတျတှကေ ခဈြရတဲ့တဈခွားအကွောငျးအရာလေးတှလေညျးရှိပါသေးတယျ။ဒီအကွောငျးအရာတှကေိုသိပွီးရငျ ပိုတိုးလို့သာခဈြသှားကွဦးမှာပါ။ဒီတော့ ဘယျလိုအကွောငျးအရာတှကွေောငျ့ သူ့ကိုပရိသတျတှကေ သညျးသညျးလှုပျနတောလဲဆိုရငျ…
*K က ပရိသတျတှရေဲ့ပွောစကားကို အမွဲနားထောငျတတျသူတဈယောကျပါတဲ့။အငျတာဗြူးတဈခုမှာ “ကြှနျတျောက ပရိသတျတှရေဲ့စကားကို အမွဲအလေးထားပါတယျ။သူတို့ရဲ့စကားတှကေို ဘယျတော့မှစိတျမဆိုးပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့က ဘယျတော့မှမှားတဲ့အရာကိုမပွောပါဘူးတဲ့။ကြှနျတေျာ့ကိုလညျးအကောငျးဆုံးခဈြပေးကွတယျ။ပွီးတော့ အသကျကွီးသှားတဲ့အခါလညျး နုပြိုအောငျ Botox မထိုးဖို့လညျးပွောထားပါသေးတယျ။ကြှနျတျောကလညျးပလတျစတဈဆာဂရြီလုပျဖို့ အစီအစဉျလုံးဝမရှိပါဘူး”ဆိုပွီးဖွခေဲ့ဖူးပါတယျ။ပရိသတျဆီက ဝဖေနျအကွံပွုတာတှကေိုလညျးအားလုံးမှတျထားပွီးလိုကျနာပါတယျတဲ့။ဘယျလိုတောငျ ပရိသတျကိုအလေးထားတာလဲနျော 😍
*အသကျကွီးလာလို့လညျးစိတျညဈမိတဲ့သူမြိုးမဟုတျပါဘူး။”သူ့ရဲ့အသကျ ၂ဝအရှယျမှာလညျး ကြှနျတျောက ငယျရှယျတကျကွှတဲ့လူငယျတဈယောကျဖွဈခဲ့ပါတယျ။အဲ့တုနျးက ရငျ့ကကျြတဲ့လူတဈယောကျတော့ မဟုတျခဲ့ဘူးပေ့ါ။အခု အသကျ ၃ဝပိုငျးဝငျလာတဲ့ခံစားခကျြကိုလညျးသဘောကပြါတယျ။အနုပညာကိုလလေ့ာတဲ့အခါမှာလညျးပိုပွီးကယျြကယျြပွနျ့ပွနျ့မွငျလာတယျ။သရုပျဆောငျတဲ့အပိုငျးကိုလညျးပိုပွီးကောငျးကောငျးလုပျနိုငျလာပါတယျ”ဆိုပွီး ဖွခေဲ့ဖူးပါတယျ။
*အကျရှငျဇာတျဝငျခနျးတှရေိုကျရတာကိုလညျးသဘောကပြါတယျတဲ့။ဒဏျရာအနာတရ ရသှားရငျတောငျ အကျရှငျပိုငျးတှလေုပျရတာပိုပွီးကနြေပျပါတယျလို့ပွောခဲ့ဖူးပါတယျ။”ဝနျထမျးတှနေဲ့ဒါရိုကျတာက ဒီလိုအကျရှငျဇာတျဝငျခနျးတှရေိုကျတဲ့အခါ ကြှနျတျောဒဏျရာအနာတရဖွဈမှာကို
စိုးရိမျကွပါတယျ။ဒါပမေဲ့ ဒီအသကျ ၂၀၊၃၀ ဝနျးကငျြက အကျရှငျဇာတျဝငျခနျးတှရေိုကျကူးဖို့အကောငျးဆုံးအခြိနျပါပဲ။ကြှနျတျောငယျငယျတုနျးက ဂကျြကီခနျြးရဲ့ရုပျရှငျတှကေိုကွညျ့ခဲ့ဖူးပွီးသူ့ရဲ့ အကျရှငျဇာတျဝငျခနျးတှကေိုလညျးအရမျးကွိုကျပွီးအရမျးလေးစားပါတယျ။ရုပျရှငျတဈကားရိုကျပွီဆို
သူက သူလုပျနိုငျသမြှအားလုံးလုပျတာပါပဲ။ကြှနျတျောလညျး အဲ့ဒီလိုဖွဈခငျြပါတယျ”လို့အငျတာဗြူးမှာဖွခေဲ့တာပါ။
*စဈမှုထမျးဆောငျပွီးတဲ့နောကျမှာ ပိုပွီးပြျောရှငျအောငျနတေတျလာလို့လညျး စဈတပျကိုကြေးဇူးတငျပါတယျတဲ့။”စဈမှုမထမျးဆောငျခငျတုနျးက ကြှနျတျောက ကြှနျတေျာ့ရဲ့နစေ့ဉျဘဝကိုထိနျးခြုပျထားလရှေိ့ပါတယျ။အပွငျလညျးခဏခဏမထှကျသလို အရကျသောကျတဲ့အခါမှာလညျးသီးသနျ့ေ
သာကျလို့ရတဲ့အခနျးရှိတဲ့ဘားတှကေိုသာသှားတာပါ။ကြှနျတေျာ့ရဲ့မနျနဂြောလညျးအမွဲပါပါတယျ။ကောလဟာလသတငျးတှထှေကျမှာစိုးလို့ မိနျးကလေးဧညျ့သညျတှကေိုတောငျမဖိတျချေါဖူးပါဘူး။စဈမှုထမျးပွီးတဲ့နောကျမှာ ကြှနျတျောပွောငျးလဲသှားခဲ့တယျ။ညဘကျတှမှော အပွငျပိုထှကျ
တတျလာသလို အသားကငျဆိုငျတှကေိုသှားတယျ။တဈယောကျတညျးကားစီးတယျ။ဘားသှားတဲ့အခါမှာလညျး ကြှနျတျောကအနုပညာရှငျတဈယောကျဆိုတာခဏပဲလူတှသေတိထားကွညျ့ကွတာပါ။ပွီးတော့လညျး ကိုယျ့အထာနဲ့ကိုယျဖွဈသှားကွတာပါပဲ။စဈတပျထဲရောကျမှ ကြှနျတျောက အရာရာကိုSerious ဖွဈစှာနနေခေဲ့မှနျး နားလညျတော့တယျ”ဆိုပွီးစဈမှုထမျးဆောငျရာကနေ ပွနျလာပွီးတဲ့နောကျ အငျတာဗြူးမှာဖွခေဲ့ပါတယျ။
*K ဟာ တဈခွားသူတှထေကျပိုပွီးအလုပျကိုရူးသှပျစှာလုပျသူတဈယောကျလို့လညျးသိရပါသေးတယျ။ရုပျရှငျရိုကျကူးရေးပွီးသှားတဲ့အခါ နားရတဲ့အခြိနျ၊ဘာမှမလုပျရတဲ့အခြိနျတှကေိုရငျဆိုငျဖို့ခကျခဲပါတယျတဲ့။”သူ့အလုပျမှာလညျး အရာအားလုံးကိုစိတျကနြေပျတဲ့အထိလုပျခငျြတဲ့သူတဈယောကျပါ။သူသာအေးအေးဆေးဆေးနဲ့အိပျနမေယျဆိုရငျ အောငျမွငျမှုဆိုတာရှိလာနိုငျပါ့မလား?”ဆိုပဲ။သူ့ရဲ့ ကွိုးစားမှုက လုံးဝကွီးကို အရာထငျခဲ့တာပါ။
*စိတျကူးယဉျဆနျဆနျဇာတျလမျးတှကေိုလညျး K က ကွိုကျပါသေးတယျ။အဲ့ဒီလိုဇာတျလမျးတှနေဲ့လညျး သူ့ရဲ့သရုပျဆောငျပုံ၊သူ့ရဲ့ရုပျရညျက ပိုပွီးအံကိုကျဖွဈတယျလို့ထငျပါတယျတဲ့။
*K ရဲ့စိတျကူးယဉျခဈြသူမိနျးကလေးပုံစံကိုတော့ အားလုံးသိခငျြကွတယျဟုတျ! K က ခြောမောလှပတဲ့မကျြနှာတဈမကျြနှာဟာ မွနျမွနျဆနျဆနျအိုမငျးသှားနိုငျပါတယျ။အဲ့ဒါကွောငျ့ သူက နှလုံးသားနှေးထှေးတဲ့သူမြိုးကိုပဲသဘောကပြါတယျ။သူ့ထကျလညျး ပိုပွီးစိတျနစေိတျထားရငျ့ကကျြတဲ့သူ၊သူမရဲ့ ပုခုံးပျေါမှာကြှနျတျောပငျပနျးတဲ့အခြိနျတိုငျး၊အမွဲတမျး ခေါငျးအုံးထားခငျြပါတယျတဲ့။အဲ့လဲ့ ရိုလိုကျတာ ❤
*အရငျတုနျးက သူဟာ မာနကွီးပွီးဘဝငျမွငျ့တဲ့အခိုကျအတနျ့မြိုးခံစားခဲ့ရဖူးပါတယျတဲ့။၂၀၀၅ခုနှဈတုနျးကရိုကျကူးခဲ့တဲ့ King and the Clown ဇာတျကားဟာ အရမျးအောငျမွငျခဲ့ပွီး လူကွိုကျမြားခဲ့ပါတယျ။အဲ့ဒီတုနျးက ကြှနျတျောက အတျောဆုံးပဲလို့တှေးခဲ့ပွီး သူငယျခငျြးတှေ၊သတငျးထောကျတှကေို မလေးမစားဆကျဆံခဲ့ဖူးပါတယျလို့ ပရိသတျတှကေိုဝနျခံခဲ့ဖူးပါတယျ။အခုတော့ K ဟာ အလုပျကိုအကောငျးဆုံးကွိုးစားပွီး ပရိသတျကိုလညျးအလေးထားတဲ့သူတဈယောကျဖွဈနပေါပွီ။
*Scarlet Heart: Ryeo ဇာတျကားရိုကျကူးဖို့အတှကျ K က ၃၃ပေါငျတောငျ ကိုယျအလေးခြိနျခခြဲ့ရပါတယျ။ဒါရိုကျတာက သူ့ပုံစံက ကဈြကဈြလဈလဈနဲ့ပိုပွီးကွညျ့ကောငျးတဲ့ပုံစံလိုခငျြတာကွောငျ့လို့ပွောခဲ့တာကွောငျ့ပါတဲ့။
*အခု ၂၀၁၈ မှာတော့ K ရဲ့ Lawless Lawyer ဇာတျလမျးတှဲလေးထှကျရှိထားပါတယျ။မကွညျ့ရသေးတဲ့ပရိသတျတှရှေိရငျ ကွညျ့လိုကျဦးနျော။မငျးသမီးခြော Seo Ye-ji နဲ့တှဲဖကျရိုကျကူးထားတာဖွဈပါတယျ။
ပရိသတျတှကေိုအလေးထားပွီး ပရိသတျတှရေဲ့စကားကိုလညျး နားထောငျတာကွောငျ့ သူ့ကို ပိုပွီးအသညျးစှဲအားပေးနကွေတာပဲဖွဈပါတယျ။ကိုယျ့အိုငျဒေါလျက ကိုယျတို့ပွောတဲ့စကားတှကေို အလေးထားတယျဆိုကတညျးက ကနြေပျစရာကွီးပါပဲ ❤